အခွင့်အရေးကိုအင်တာနက်ဥပဒေမူကြမ်းများအတွက် Web ကိုတည်ထောင်သူဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - သတင်း Rule
အခွင့်အရေးကိုအင်တာနက်ဥပဒေမူကြမ်းများအတွက် Web ကိုတည်ထောင်သူဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
Tim Berners-Lee made the proposal as part of the “web we want” campaign for an open Internet, တိကျစွာ 25 years after he first presentedapaper with plans for the World Wide Web.
“Unless we have an open, neutral Internet we can rely on without worrying about what’s happening at the back door, we can’t have open government, good democracy, good healthcare, connected communities and diversity of culture,” ဟုသူကပြောသည်.
Berners-Lee has constantly campaigned for fewer controls on the web, and has praised former US intelligence contractor အက်ဒွပ်စနိုဒင် after he revealed details of how the US government collects masses of online data.
“So I want to use the 25th anniversary for us all to do that, to take the web back into our own hands and define the web we want for the next 25 နှစ်ပေါင်း,” ဟုသူကပြောသည်.
Berners-Lee conceived the Web almost 25 years ago in his spare time at Geneva-based ကို CERN, Europe’s top particle physics lab.
21692	0 ကို CERN, အက်ဒွပ်စနိုဒင်, Geneva, ဂေါကလူကြီး, အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ, Tim Berners-Lee, ယူနိုက်တက်စတိတ်, အင်တာနက်မှလမ်းခွဲ
← Sevastopol, ရုရှားဘုန်းအသမြင်ကွင်း, '' အိမ်သို့သွားလော့စိတ်အားထက်သန်’ 20 ရောင်ရမ်းခြေထိရောက်သောမူလစာမျက်နှာကုစားခြင်းများ →